Iprofayile yenkampani kunye neNkcubeko-iLongou yeShishini laMazwe ngaMazwe (iShanghai) Co., Ltd.
Uphuhliso lwewebhu kunye nentengiso
ILongou International Business (Shanghai) Co., Ltd.yasekwa ngonyaka ka-2007 kwaye ikwiziko lezoqoqosho-eShanghai. Yimveliso yezongezo zeekhemikhali zomenzi kunye nomnikezeli wezisombululo zesicelo kwaye uzibophelele ekunikezeleni ngezinto zokwakha kunye nezisombululo kubathengi behlabathi.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-10 yophuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, LONGOU INTERNATIONAL iye ukwandisa isikali seshishini layo mpuma Asia, Middle East, iYurophu, Melika, Australia, Afrika kunye neminye imimandla emikhulu. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezikhulayo zabathengi bamanye amazwe kunye nenkonzo yabathengi engcono, inkampani imisele iiarhente zenkonzo zaphesheya, kwaye yenze intsebenziswano enkulu kunye neearhente kunye nabasasazi, ngokuthe ngcembe isenza uthungelwano lwenkonzo yehlabathi.
LONGOU INTERNATIONAL eneemfuno ezizodwa kwi-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa Cellulose kaEtere (HPMC, HEMC, HEC) kunye Redispersible umgubo Polymer kunye nezinye ongeziweyo kushishino lokwakha. Iimveliso zigubungela amabakala ahlukeneyo kwaye zineemodeli ezahlukeneyo kwimveliso nganye.
Izicelo zibandakanya udaka olomileyo, ikhonkrithi, ukuhombisa, iikhemikhali zemihla ngemihla, intsimi yeoyile, ii-inki, iiseramikhi kunye namanye amashishini.
NGOKUPHELA ukubonelela abathengi behlabathi ngemveliso ekumgangatho ophezulu, inkonzo egqibeleleyo kunye nezona zisombululo zibalaseleyo ngemodeli yeshishini yemveliso + kwitekhnoloji + yenkonzo.
Sibonelela ngale nkonzo ilandelayo kubathengi bethu
Funda iipropathi zemveliso okhuphisana nayo.
Nceda umxhasi afumane ibakala elilinganayo ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Inkonzo yoQulunqo ukuphucula ukusebenza kunye neendleko zokulawula, ngokwemo yezulu ethile yomthengi, isanti ekhethekileyo kunye nepropathi yesamente, kunye nomkhwa wokusebenza owahlukileyo.
SineeLebhu zeMichiza kunye neLebhu yokuSebenza ukuqinisekisa ukoneliseka kwe-odolo nganye:
Iilebhu zamachiza kukusivumela ukuba sivavanye iipropathi njenge-viscosity, ukufuma, inqanaba lothuthu, i-pH, umxholo weqela le-methyl kunye ne-hydroxypropyl, isidanga sokubambela njl.
Ilebhu yesicelo kukusivumela ukuba silinganise ixesha elivulekileyo, ukugcinwa kwamanzi, amandla okubambelela, islip kunye nokumelana ne-sag, ixesha lokubeka, ukusebenza njl.
Iinkonzo zabathengi ezininzi:
Sinikezela iinkonzo zethu ngesiNgesi, iSpanish, isiTshayina, isiRashiya nesiFrentshi.
Sineesampulu kunye neesampulu zokubala zento nganye ukuqinisekisa ukusebenza kweemveliso zethu.
Siyikhathalela inkqubo yamalungiselelo kude kube kwizibuko lokuya ukuba umthengi uyayifuna.
Imveliso yenkampani yokubonisa amandla
I-Longou International Business (i-Shanghai) Co., Ltd. yasekwa ngo-2007 kwaye ivelisa izinto zokwakha zemichiza kangangeminyaka eli-14. Sineefektri zethu kwimveliso nganye kwaye imveliso yethu isebenzisa izixhobo zangaphandle. Kwimodeli enye yemveliso enye, sinokugqiba iitoni ezingama-300 ngenyanga enye.
Ukuveliswa kwetekhnoloji kunye nokuvavanywa
Iqela le-R & D elinamandla, bonke banobuchwephesha bokwakha iikhemikhali kwaye banamava kule ndima. Zonke iintlobo zoomatshini bokuvavanya kwilabhoratri yethu ezinokuhlangabezana neemvavanyo ezahlukeneyo zophando lweemveliso.
Inkampani yasekwa ngu Mnu Hongbin Wang egameni lenkampani Shanghai Rongou Chemical Technology Co., Ltd. Kwaye uqale ukujongana ishishini kumazwe angaphandle.
Abasebenzi bethu bonyukile baba ngaphezulu kwekhulu labasebenzi.
Igama lenkampani litshintshile laba yiLongou International Business (Shanghai) Co., Ltd ..
Inkampani yethu yaseka inkampani yesebe iPuyang Longou Biotechnology Development Co, Ltd.
Siqala ukwakha umzi-mveliso omtsha ovelisa i-emulsion-iHANDAO Chemical.
I-LONGOU INTERNATIONAL okwangoku inabasebenzi abangaphezulu kwe-100 kwaye ngaphezulu kwe-20% ikwiziqu zeMasters okanye zoGqirha. Phantsi kobunkokheli bukaSihlalo uMnu. Hongbin Wang, siye saba liqela eliqolileyo kwicandelo lezongezo kulwakhiwo. Siliqela lamalungu amancinci kwaye anamandla kwaye azele ngumdla emsebenzini nakubomi.
Uphuhliso lwethu luxhaswa yinkcubeko yokudibana kule minyaka idlulileyo. Siyiqonda ngokupheleleyo inkcubeko yakhe yokudibanisa inokwenziwa kuphela ngeempembelelo, ukungena kunye nokudityaniswa.
Umnqophiso wethu: Yenza izakhiwo zikhuseleke, zisebenzise amandla ngakumbi, kwaye zibe ntle ngakumbi;
Ifilosofi yeshishini: inkonzo yokumisa enye, ulwenziwo olwenziwe ngokwezifiso, kwaye uzame ukwenza ixabiso elikhulu kumthengi ngamnye;
Amaxabiso asisiseko: umthengi kuqala, ukusebenzisana, ukuthembeka nokuthembeka, ukugqwesa;
Umoya weqela: iphupha, uthando, uxanduva, ukuzinikela, ubunye kunye nomceli mngeni kwizinto ezingenakwenzeka;
Umbono: Ukufezekisa ulonwabo namaphupha abo bonke abasebenzi beLONGOU INTERNATIONAL.
Yiba li-100% elinoxanduva lwezikhalazo ezisemgangathweni, umba we-0 womgangatho kwimisebenzi yethu edlulileyo.
Amakhulu eemveliso kumanqanaba ahlukeneyo kukhetho lwakho.
Iisampulu zasimahla (ngaphakathi kwe-1 kg) zinikezelwa ngalo naliphi na ixesha ngaphandle kwemali yokuthwala.
Nayiphi na imibuzo iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezili-12.
Ngqongqo ekukhetheni izinto ezingafunekiyo.
Ixabiso elifanelekileyo nelokukhuphisana, ukuhanjiswa ngexesha.